फेसबुकबाट च्याटिङ म्यासेज कसरी डिलिट गर्ने ? | ''Knowledge Never Ends''
फेसबुकबाट च्याटिङ म्यासेज कसरी डिलिट गर्ने ?
फेसबुक अकाउण्ट खोलेपछि सायदै मान्छे होलान् जो तस्वीर शेयर गर्दैनन्, स्टाटस अपडेट गर्दैनन् तथा आफ्ना साथीहरुसँग च्याटमा मीठा मीठा कुरा गर्दैनन् । फेसबुकमा च्याटिङ गर्नु तथा सँगै स्टाटस पनि अपडेट गर्नुको मज्जा नै बेग्लै । यसरी च्याटमा गरिएका कुराकानी सबै फेसबुक अकाउण्टमा सुरक्षित भएर बस्छन् । जुन पछि पनि पढ्न पाइन्छ ।
कहिलेकाहीँ फेसबुकमा निकै गोप्य कुरा च्याटमा गरिएको हुन्छ । यदि तपाइँको फेसबुक अकाउण्ट अर्को कुनै व्यक्तिले पनि खोल्नसक्छ र उसलाई तपाइँले कसैसँग गरिएको गोप्य च्याटको बारेमा थाहा नदिनु छ भने तपाइँले आफ्नो फेसबुक च्याट डिलिट गर्नुपर्छ । यदि गर्नुभएन भने तपाइँले कोही साथीसँग गरेको गोप्य च्याट अरुले पनि हेर्न पाउने सम्भावना हुन्छ ।
फेसबुकबाट च्याटिङ म्यासेज डिलिट गरेर आफ्नो गोप्य सम्वादलाई लिक हुन नदिनका लागि निम्न उपाय अपनाउनुहोस् :
– सबैभन्दा पहिले आफ्नो फेसबुकको होम पेजमा जानुहोस् त्यहाँ रहेको उल्टो हातजस्तो संकेतसहितको म्यासेज बक्समा क्लिक गर्नुहोस् ।
– म्यासेज बक्समा क्लिक गरेसँगै तपाइँका सबै म्यासेज खुल्नेछन् । त्यसपछि एक्सन मेनुमा जानुहोस् र डिलिट म्यासेज नामक अप्सन छान्नुहोस् । अनि जुन प्रकारका म्यासेज तपाइँ डिलिट गर्न चाहनुभएको हो त्यसको बक्समा क्लिक गर्नुहोस् ।
-यदि तपाइँ आजसम्मका सबै च्याटिङ म्यासेज नै डिलिट गर्न चाहनुभएको हो भनी एक्सन मेनुमा गएर डिलिट कन्भरसेसन भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस् । यसो गर्दा तपाइँले फेसबुक अकाउण्ट सुरु गरेदेखिका सबै च्याटिङ म्यासेज डिलिट हुनेछन् ।
Tagged: फेसबुकबाट च्याटिङ म्यासेज कसरी डिलिट गर्ने ?
← तपाईंको कम्प्युटरको Speed बढाउने केही Tips हरु
भाइबर @ डेस्कटप →